सावधान ! फलफुलमा संगीनी सूईदेखि खतरनाक केमिकलको प्रयोग - Maxon Khabar
Home / Unlabelled / सावधान ! फलफुलमा संगीनी सूईदेखि खतरनाक केमिकलको प्रयोग
सावधान ! फलफुलमा संगीनी सूईदेखि खतरनाक केमिकलको प्रयोग
२०७६ भदाै १
नेपाल सरकारले केहि समय अगाडी बिदेशबाट ल्याइएका फलफुल तथा तरकारीहरूमा बिषादी परीक्षण अनिबार्य गर्ने याेजना बनाएपनी पछी एकाएक बयाक गियर लाउदै तयारी नपुगेकाे भन्दै तत्काल साे याेजना कायान्वयनमा नल्याउने निर्णय गर्न बाध्य भयाे । नेपाल मा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा बिषादी युक्त हुन्छ भन्नेमा दुइ मत छैन ।
तर अचम्मकाे कुरा के भने नेपालमै उत्पादन भएका फलपफुलमा पनी अखाध्य बिषादी प्रयाेग हुन्छ भन्ने थाहा पाउदा सबैलाइ आश्चार्य लाग्न सक्छ । गणडकी प्रदेशकाे पोखरामा रहेका तरकारी बजारमा व्यापारीहरुले काँचो केरालाइ २४ घन्टामै पकाउन बिषादी छर्केर बिक्री गर्ने गरेकाे रहस्य सम्बाद न्युजले रहस्य खुलेकाे हाे । सुन्दर नगरी पोखराको शान्ती बन बाटिका नजिकै रहेको फलफूल तथा तरकारी बिक्री केन्द्रहरूका कैयाै सटरहरूमा १ दिनमै केरा पकाउने बिषादी टेबल मूनी लूकाएर राखेको हुन्छ । सम्वाद न्यूज टिमले केराको सानो व्यापारी बनेर गरेकाे गाेप्य अपरेसनमा ।
ब्यापारीहरूले २ लिटर पानीमा १ बिर्को केमिकल , बिषादी मिसाउने र केरा एउटा काठको बाकसमा राख्ने अनि बिषादी छर्केर एक दिन ढाकेर राखेपछी भोलिपल्ट केरा पहेलो भएर केरा पाक्ने बताएका छन । व्यापारीले केरामा संगिनी सूइ हाल्छ नि हो भनेर साेधेकाे प्रश्नमा भूईकटहरमा सूईकाे प्रयोग गरीने बताएका छन । यस बिषयमा जानकारी गराएपछी उपभोक्त मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले प्रशाशनियक निकाय संग छलफल गरी तूरुन्तै अनुगमन गरी कारबाही बताएका छन ।
यसरी खुलमखुला फलफूलमा बिषादी प्रयाेग गरी जन स्वास्थ्यमा खेलवाड भैरदा पनी सम्बन्धित निकाय भने माैन छन । यस्ता बिषादी तथा केमिकल युक्त फलपफुल सेबन गरेपछी आँखा चिलाउने, घाँटी दुख्ने, पखला लाग्ने, क्यान्सर छिनछिनमा तिर्खा लाग्ने, त्यती मात्र नभएर हृदयघात सम्म हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउछन ।